Sidee loo helaa fiisada Mexico ee Talyaaniga? Tilmaame gaaban - ALinks
Waxaad go'aansatay inaad booqato mid ka mid ah waddamada ugu caansan adduunka, Mexico! Waxaad si sax ah uweydiisan doontaa naftaada dukumiintiyada aad ubaahantahay: sida had iyo jeerba, wadamada ka baxsan Midowga Yurub, kaarka aqoonsiga kuma filna.
Ma u baahanahay fiiso aan ku aado Mexico?
Maya, Talyaanigu uma baahna fiiso ay ugu safraan Mexico, taas oo lid ku ah waxa aad u maleyn karto. Uma baahnid fiiso sax ah si aad Mexico ugu gasho baasaboor Talyaani ah. Laakiin waxaad u baahan doontaa Kaarka Dalxiiska ama Foomka Socdaalka Badan (FMM) ama, Isbaanish, 'Forma Migratoria Múltiple'.
Kaarka Dalxiis waa foom aad ka buuxin karto garoonka diyaaradaha markaad gaarto Mexico. Talyaanigu wuxuu tegi karaa Mexico fiiso la’aan wuxuuna joogi karaa ilaa 180 maalmood.
Sidoo kale waad dalban kartaa Kaarka Dalxiis intaadan kaligaa safrin halkan bogga Dowladda Mexico, laakiin haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah oo aad hubiso inaad haysato wax kasta oo aad u baahan tahay waxaad la mari kartaa adeegga fiisaha lagu kalsoon yahay, sida iVisa, oo iyana ku timaada af Talyaani sidoo kale.
Xilligan la joogo, Abriil 2021, weli waxaad u baahan tahay inaad buuxiso foom caafimaad ka hor intaadan imaan Mexico, foomkani waa su'aalo lagu aqoonsanayo waxyaabaha halista ku keeni kara dadka safarka ah ama Isbaanishka, 'Cuestonarion de identificacion de factores de riesgo en viajeros'.
Wixii xaddidaadda safarka ugu casrisan ee Mexico hubi ah Xarunta Safarka ee IATA lana xiriir shirkadaada diyaaradaha intaadan safrin.
Talyaani uma baahna fiiso laakiin waxay u baahan yihiin inay codsadaan Kaarka Dalxiiska. Waad samayn kartaa halkan ama haddii aad u baahan tahay caawimaad deg-deg ah oo shakhsi ahaaneed oo ku saabsan kaarkaaga dalxiis waxaad mari kartaa adeegga fiisaha lagu kalsoon yahay, sida Visa.
Akhri wax dheeraad ah oo ka codso iVisa
(sidoo kale af Talyaani haddii aad doorbideyso)
Waa maxay Foomka Socdaalka ee Badan (FMM)?
Markaad timaaddo, waa inaad foom ka buuxisid maamulka deegaanka. foomkani caadi ahaan waa bilaash sababtoo ah qiimaheeda, 575 pesos Mexico, waxay ahayd in lagu daro tigidhka duulimaadkaaga, waxaad ka hubin kartaa shirkaddaada diyaaradaha.
Mexico maahan wadanka kaliya ee si toos ah xalka ugu soo bandhiga garoonka diyaaradaha halkii laga heli lahaa fiiso dhaqameed oo safaaradeed, Kuwait sidoo kale waxay siisaa bedel lamid ah. Dad badan ayaan ku raaxaysanin dukumiinti la'aan inta ay safrayaan ama fikradda ah inay dal shisheeye ka codsadaan. Sidaa darteed halkii aad ka dalban lahayd Kaarka Dalxiiska garoonka diyaaradaha markii aad timaaddo, saacado badan oo safar ah iyo shandadaha oo dhan, waxaad ku sameyn kartaa ka hor inta aanad si raaxo leh guriga uga bixin.
Waad dalban kartaa Kaadhka Dalxiiska FMM halkan bogga Dowladda Mexico, degelkan wuxuu ku qoran yahay Isbaanish, Ingiriis, Jabbaan, Shiine iyo Kuuriyaan, markaa isticmaal Google Translate haddii aad rabto inaad ku aragto luqad kale.
Si aad u dalbato waxaad u baahan tahay oo keliya:
emayl (hubi inuu sax yahay maadaama ay tahay halka dukumiintiga laguugu soo diri doono),
tigidhka diyaaradda oo ay kujirto nambarka duulimaadka) iyo
nooc ka mid ah lacag bixinta elektarooniga ah si loogu bixiyo adeegga.
Waxa kale oo aad ka samayn kartaa Kaarka Dalxiiska iVisa, akhri wax dheeraad ah
Waa imisa Kaarka Dalxiis ee Mexico?
Waxaa jira laba nooc oo Kaarka Dalxiiska (FMM) oo ku saleysan imaatinka diyaarad ama dhul. Xaaladda kowaad, waxba kama bixin doontid adeegga maxaa yeelay qiimaha ayaa ku jira tigidhkaaga diyaaradda, marka labaadna waa inaan ku darnaa Miisaanka 575, oo ah 24 euro, ama 188 Yuan Shiine ah ama 29 doolarka Mareykanka ah.
Ugu dambeyntiina, waxaa jira waqtiyo kala geddisan oo kala duwan oo u dhexeeya 15 daqiiqo illaa ugu badnaan hal maalin shaqo. Haddii aad u baahan tahay wax dhaqso u raadsada caawimaad, af Talyaani, at iVisa.
Akhri wax dheeraad ah oo ka codso iVisa, oo lagu heli karo af Talyaani
Mexico waa mid kamid ah meelaha loo dalxiis tago adduunka. Dadku, adduunka oo dhan, waxay booqdaan xeebaheeda qoraxdu ku taal ama goobihii taariikhiga ahaa ee taariikhiga ahaa. Dhacdooyinka dhaqameed, qaab dhismeedka, iyo quruxda dabiiciga ah ayaa ka dhiga wax aad uga badan meel la aado.
Daboolka kore waa Ocean a Calle 14 2, Río Lagartos, Messico. Sawir Gabriele Francalanci on Muuji
Nidaamka Iskuulka iyo Waxbarashada ee Meksiko
Fiisaha Singapore ee Hindida
Fiisaha Schengen ee Faransiiska
Ku Samee Calaamaddaada Dhaxalka, Madxafyada caanka ah ee Mexico